Ihe kacha mma smartwatches inye na ekeresimesi | Akụkọ akụrụngwa
Ihe kacha mma smartwatches inye na Christmas
Krismas dị nso. Ọ bụrụ na anyị anaghị erite uru dị iche iche nke oge gara aga Black Friday ma anyị agaghị aga n'ihu n'emeghị ihe doro anya banyere ihe anyị nwere ike ịzụta maka onye mmekọ, nne, nna, ụmụaka ma ọ bụ ndị enyi, na Actualidad Gadet anyị na-eke dị iche ndepụta nke ezigbo ihe iji nye n'oge ekeresimesi.
Si buscas smart ọkụ, quantifying ọla aka, smart ọkà okwu o ekweisi inye ndị ọzọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ ntuziaka ndị anyị bipụtara n'oge gara aga. Ugbu a ọ bụ oge nke smartwatches, otu n'ime ngwaọrụ ndị na - enweta ahịa kachasị na afọ ndị na - adịbeghị anya yana mgbaaka quantifying.
1 Smartwatch ma ọ bụ quantifying mgbaaka?
2 Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ
6 Fosil Sport Smartwatch
7 Usoro Apple Watch 3/4/5
Smartwatch ma ọ bụ quantifying mgbaaka?
Tupu anyị ekpebie na smartwatch anyị kwesịrị ịkọwa Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti smartwatch na mgbaaka quantifying. Karịsịa, ọdịiche bụ isi, na mgbakwunye na ọnụahịa ahụ, dị na arụmọrụ ha na-enye anyị.
Ọ bụ ezie na smartwatches na-enye anyị nnukwu nha ihuenyo na ohere nke zaa oku ma ozi, quantifying ọla aka na-elekwasị anya iji tụọ ọrụ ahụ anyị, ọrụ anyị nwekwara ike ịchọta na smartwatches.
Ọzọ dị iche n'etiti smartwatches na quantifying ọla aka dị na ndụ batrị. Ọ bụ ezie na smartwatches nwere ndụ batrị kachasị nke otu ma ọ bụ ụbọchị abụọ, ịkọwapụta wristbands nwere ike ịdịru izu abụọ.
Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ
El Samsung Galaxy Watch Ọrụ Ọ bụ ọgbọ mbụ nke smartwatches ọhụrụ emere iji ruo ọtụtụ mmadụ. Ọgbọ nke mbụ a na-enye anyị a Ihuenyo 1,1 nke nwere 360 ​​× 360 mkpebi na batrị 230 mAh. O nwere IP68 nchebe megide mmiri na ájá na nkwụsi ike ruo 5 ATM.
N'ihe banyere arụmọrụ, ọ bụrụ na anyị ejiri ya na Samsung smartphone, anyị ga-enwe ike ị nweta ọtụtụ n'ime ya, mana ọ bụghị ihe dị mkpa iji nwee ike ịnụ ụtọ uru niile ọ na-enye anyị ma a bịa chọpụta etu anyị si emega ahụ, tulee etu obi anyị si eme ma lelee usoro ihi ụra anyị.
Ụgwọ nke Samsung Galaxy Watch Ọrụ sitere na 199 euro.
Ọgbọ nke abụọ nke Samsung's Watch nọ n'ọrụ na-enye anyị ihe fọrọ nke nta otu ihe ahụ dị ka ọgbọ mbụ ma ọ na-agbakwunye ọrụ ọhụrụ abụọ na-adọrọ mmasị dị ka nchọpụta ọdịda na electrocardiogram.
Ekele daa nchọpụta, osooso nke ngwaọrụ ahụ na-achọpụta na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na anyị adaba na mberede ma na-akpọ anyị ka anyị gwa anyị ihe mberede. Ọ bụrụ na anyị azaghị arịrịọ ahụ, ọ ga-eme ozugbo ịkpọ oku na-ekwupụta ọnọdụ anyị.
Ọrụ electrocardiogram na-enye anyị ohere ịchọpụta ihe na-adịghị mma n’obi anyị nke anyị ahụbeghi mbụ. Apple Watch, smartwatch mbụ nke gụnyere atụmatụ a, echekwala ọtụtụ ndụ n'ihi ọrụ a.
Samsung Watch Active 2 nwere ihuenyo 1,4-inch (44 mm) / 1,2-inch (40 mm), Tizen (sistemụ arụmọrụ Samsung) na Exynos 910 na-achịkwa ya.Ọ na-enye anyị 4 GB nchekwa, bluetooth 5.0. na ọ dịkwa na ụdị LTE.
Ụgwọ nke Samsung Galaxy Ele Ọrụ 2 44mm ọ bụ 295 euro. Ọ bụrụ n’anyị achọghị imefu nnukwu ego, anyị nwere ike nweta ọgbọ mbụ, Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ nke ọnụahịa ya bụ euro 195.
Na mgbakwunye na ụdị ọrụ, Samsung na-enye anyị Samsung Galaxy Watch, ụdị kachasị dị elu. Ihe nlere a bu onye ozo bu onye ozo nke Gear nke meriri ahia ya na afo ole na ole gara aga ma nwee oganihu na ahia. Ọ dị na nha abụọ: 42 na 46 mm na Emere ya site na ihe eji ego.
Dị ka ụdị niile Samsung na-enye ugbu a na ahịa smartwatch, ọ bụ Tizen na-achịkwa ya. 46dị 1,3mm nwere ihuenyo 42-inch mgbe ihe ngosi 1,2mm nwere ihuenyo XNUMX-inch. Ihuenyo abụọ Ha nwere mkpebi nke 360 ​​× 360.
Batrị nke 46mm bụ 472mAh, 270mAh maka ụdị 42mm. Ihe nlereanya a bụ otu n’ime ihe ole na ole nwere NFC mgbawa inwe ike ịkwụ ụgwọ site n'aka anyị. Ọ nwere mgbawa GPS iji nyochaa ọrụ ahụ anyị n’èzí.
Ụgwọ nke Samsung Galaxy Watch sitere na 269 euro, maka ụdị 46 mm.
Ọ bụrụ na ị na-achọ nnukwu smartwatch, ndị Huawei Watch GT 2 bụrụ onye ị na-achọ. Huawei's Watch GT 2 bụ ọhụrụ nlereanya n'ihu site Asia ike na ọ bụ ọgbọ nke abụọ nke Watch GT, ọgbọ mbụ rere ihe karịrị nde 10.
Ihe nlereanya a nwere a Ihuenyo AMOLED nke 1,39-anụ ọhịa, na-achịkwa LiteOS (sistemụ arụmọrụ nke Huawei) na Kirin A1 processor (nke Huawei mepụtara ma rụpụta ya). O nwere nchekwa maka egwu 500 na nnwere onwe nke nwere ike iru izu 2 (na-ebelata ọrụ ya niile kachasị).
Ọ dakọtara na ama ọ bụla nwere iOS (chọrọ iOS 9 ma ọ bụ mgbe e mesịrị) na gam akporo (chọrọ Android 4.4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị) site na Ngwa Health Huawei. Ọ dị n'ụdị abụọ nke 42 na 46 millimita, ya mere ọ na-adaba na nkwojiaka ọ bụla.
Banyere arụmọrụ, nke bụ ihe dị anyị mkpa, ọ bụghị naanị na anyị onwe anyị dekọọ ụda obi anyị ma nyochaa ụra anyị, kamakwa ọ na-agụpụta ụdị mmega ọ bụla anyị na-eme na akpaghị aka, ma n’èzí ma n’ebe a na-emega ahụ́.
El Huawei Watch GT 2 dị na Amazon maka 239 euro.
Fosil Sport Smartwatch
The watchmaker Fossil bụ otu n'ime ndị kasị ochie na mpaghara smartwatch na ezigbo ihe akaebe nke a bụ Fosil Sport Smartwatch. Ihe nlereanya a, n’adịghị ka ụdị kpochapụwo nke ụlọ ọrụ a, na-enye anyị ụdị egwuregwu, ọ dị nha abụọ 41 na 43 mm na agba atọ: acha anụnụ anụnụ, nwa na pink (naanị dị na ụdị 41 mm).
N'ime Fosil Sport anyị na-ahụ Android Wear, Ọ bụ Snapdragon Wear 3100 na-achịkwa ya, ọ nwere mgbawa NFC iji kwụọ ụgwọ site na nkwonkwo aka anyị na Google Pay ma nwee ihe mmetụta iji nyochaa ma ụra anyị na ọrụ egwuregwu anyị na oke obi anyị.
Eriri ihe nlere nke ihe nlere a bu 22 mm, ya mere, anyi nwere otutu nhọrọ iji hazie ya. Ọnụahịa nke Fosil Sport sitere na Euro 149 na Amazon.
Usoro Apple Watch 3/4/5
Ọ bụrụ na ị nwere iPhone, smartwatch kachasị mma ị nwere na nke ahụ na-enye gị ohere iji zuru oke nke iOS bụ Apple Watch. Na Apple Watch ị nwere ike ọ bụghị naanị ịzaghachi ozi, kamakwa ị nwekwara ike ịkpọ oku.
Apple Watch Series 3 bụ ihe dị ọnụ ala dị ala anyị nwere. Ihe dị iche na usoro 4 na 5 dị na ihuenyo, nke na-esi na 38 gaa 40 na site na 42 ruo 44 mm. Eriri na dakọtara na ụdị abụọ ahụ.
Appledị Apple Watch niile dị na ụdị LTE. Isi ihe dị iche anyị na - ahụ n’etiti usoro 4 na usoro 5 bụ nke ikpeazụ a na-egosipụta. Ha abụọ gụnyere nchọta ọdịda na ọrụ electrocardiogram iji chọpụta ọdịiche dị n’ime obi.
El Apple Watch Series 5 dị na 44 mm mbipute maka 479 euro na Amazon. na Apple Watch Series 3 dị maka 229 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Ihe kacha mma smartwatches inye na Christmas
Na Apple ha abụghị maka njakịrị na mbipụta nke iPod Classic gị